Little Ella at Eagle Bay - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Carmel
U-Carmel Ungumbungazi ovelele
Itholakala emgwaqweni owodwa we-cul de sac ukusuka ebhishi futhi uhamba ngezinyawo olufushane ukuya ebhishi elihle le-E Eagle Bay. Uma uthanda ukubhukuda, ukudoba, ukubhukuda ngaphansi kwamanzi noma ukuziphumulela nje ogwini, lena yindawo ekahle kakhulu yokuba kuyo!
Indlu ilungele iholide lasebusika noma lasehlobo futhi inendawo eyanele yokuhlala futhi ujabulele indawo ezungezile.
I-BBQ yangaphandle emphemeni ishiya indawo evulekile yokuhlala ngaphandle futhi udle ngalezo zinsuku zasehlobo ezifudumele.
Kunamakamelo okulala amabili anemibhede emikhulu, kanye nendawo yokulala enemibhede elala umuntu oyedwa engu-2 x. Yonke imibhede inama-donas nemicamelo. Amashidi namathawula akunikeziwe, kodwa angalungiselelwa izindleko. Igumbi lokugezela lineshawa nendlu yangasese ehlukile, futhi kuneshawa elishisayo yangaphandle. Amanzi avela ethangi lamanzi emvula elisendaweni elinikezwa endlini ngempompi.
Eagle Bay iyindawo eyingqayizivele yeningizimu-ntshonalanga ne-Australia, esifundeni se-Margaret River Wine. Le ndawo idume ngokunikeza iwayini lokuwina, ubhiya nokudla okumnandi.
Isondelene kakhulu ne-E Eagle Bay Brewery kanye ne-Winery, futhi yimizuzu engu-10 kuphela yokushayela ukuya edolobheni lase-Dunsborough ngezindawo zokudlela nezitolo. Ibhishi i-E Eagle Bay ingenye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni, enesihlabathi esimhlophe esibonakalayo futhi inikeza isici sasenyakatho esinezindawo zokubukwa ezingenamkhawulo.
Sitholakala ngocingo noma nini.
UCarmel Ungumbungazi ovelele